दल अध्यादेश खारेजी हुँदै : 'आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संभवत: खारेजको सिफारिस गर्ने !' - Demo Khabar
काठमाडौँ, असोज । साढे दुई महिनापछि सत्तारढ गठबन्धन दल सरकार बिस्तासमा तम्सिएका छन । विपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले गठबन्धनभित्रकै दल विभाजित हुने निश्चित जस्तै भएपछि सरकार बिस्तारमा चुनौती देखिएको थियो ।
गठबन्धन दलबीच अब भने अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको हो ।  ।
सरकार गठनको साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेकाले सांसदको दौडधुप पनि झन् बढेको छ । मन्त्री बन्न नपाएकाले दलभित्र बिबाद ल्याउने देखिएपछि गठबन्धनको आइतबारको बैठकमा अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको हो ।
कान्तिपुरमा कुलचन्द्र न्यौपाने लेख्छन, नेकपा एसका नेता मुकुन्द न्यौपानेले अध्यादेश खारेजीले आफ्नो पार्टीलाई अब कुनै असर नपार्ने सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन । ‘अध्यादेश जे गर्न आएको थियो, त्यो गरिसक्यो । मान्छे त धर्तीमा आफ्ना काम सकिएपछि बिदा हुन्छ भने अध्यादेशको के कुरा भयो र ? यसले जति पानी पार्नु थियो पारिसक्यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई उकालो चढ्न सहारा चाहिएको थियो, अध्यादेश हाम्रा लागि लट्ठी बन्यो । अब थन्क्याइदिए हुन्छ ।’
सरकार बिस्तार हुने सहमतिसँगै सांसदहरु मन्त्री बन्ने र राम्रो मन्त्रालय हात पार्ने दौडधूपमा लागेका छन । अध्यादेश खारेज भए पनि यसका आधारमा भएका विभाजन भने कानुनसम्मत मानिनेछन् । ‘प्राप्त उद्देश्यको वैधता स्वतः स्थापित हुन्छ,’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र नदिएको भए वा विवाद विचाराधीन रहेको भए खारेजी हुँदा समस्या पर्ने हो । पार्टीको मान्यता पाएर प्रमाणपत्र लिइसकेपछि त्यसमाथि कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्न ।’
आइतबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी जसपा नेता महेन्द्रराय यादवले अध्यादेश फिर्ता र मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाउन सत्ता गठबन्धनका पाँच शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको बताए । ‘अध्यादेशलाई निकास दिएर लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ,’ यादवले भने, ‘सोमबार अध्यादेश खारेज भएमा दुई - तीन दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ, अब समय लाग्दैन ।’
सोमवार, आश्विन ११ २०७८१०:३७:२५